ရှောငျဒိုငျခြီကို ရှောငျ ……. စငျရျောတှနေဲ့ ပြံဝဲလိုကျ – Play Maker Sports Journal
ရှောငျဒိုငျခြီကို ရှောငျ ……. စငျရျောတှနေဲ့ ပြံဝဲလိုကျ
August 13, 2021 playmaker Predictions 0
ဘောလုံးရာသီသဈကတော့ အခြိနျမှနျရာသီစကျဝနျးအတိုငျး ဘောလုံးပရိသတျကွီးဆီ ပွနျလညျရောကျရှိ လာခဲ့ပါပွီ။ မနှဈက ကိုဗဈမှလေို့ ပရိသတျမပါဘဲ ပေါ့ရှတျရှတျဖွဈခဲ့ရတဲ့ ဘောလုံးပှဲတှဟော ဒီရာသီမှာတော့ ပရိသတျအမြားအပွားပွနျကွညျ့ခှငျ့ရခွငျးနဲ့အတူ ကလုံး မဟုတျတဲ့ အိမျကှငျးပရိသတျစဈစဈအငျအားနဲ့ အသကျပွနျဝငျလာတော့မှာပါ။ လအတျောကွာ ပှဲတှသေုံးသပျခကျြတှေ မရေးဖွဈ၊ မဖျောပွဖွဈလို့ ပရိသတျနဲ့ အဆကျပွတျသှားခဲ့မှုကွောငျ့ စိတျလှုပျရှားမှုတှေ ပြောကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ကာလအတှကျ အခုပွနျလညျပေးဆပျဖို့၊ အတူ ရငျခုနျခံစားဖို့ဆုံးဖွတျပွီး ပလေးမိတျကာနဲ့အတူ ကြှနျတျောပွနျလာခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။
ရာသီသဈအဖှငျ့ပှဲတှဖွေဈတဲ့အတှကျအသဈအသဈသောအခွအေနတှေေ၊အပွောငျးအလဲတှနေဲ့ ဒီကာလ ဘော လုံးပှဲခနျ့မှနျးရမှုဟာ ရဈသမျမမိနိုငျသေးပါဘူး။ ရာသီအဖှငျ့ပှဲတှဆေိုတာကလညျး အငျမတနျ နတျကွီးပါတယျ။ ထိပျတနျးကစားသမားသဈတှခေျေါထားပွီး အားလုံးရငျခုနျစှာစောငျ့ကွညျ့ခံရတဲ့အသငျးကွီးတှဟော တနျးတကျတှကေို အနိုငျရဖို့ အငျမတနျခကျခဲခဲ့တဲ့ဖွဈစဉျတှကေလညျး နှဈတိုငျးရာသီအစတိုငျး ရှိခဲ့တာကို ဖိုကျတာတှမေခံစားဖူး သူ မရှိသလောကျပဲမဟုတျလား။ ဒါကွောငျ့ ဒီလို ရာသီအဖှငျ့ပှဲစဉျတှမှော သတိကွီးစှာထားပွီး တဈပှဲကောငျး ရှေးခယျြဖို့ အတှေးနကျခဲ့ရပါတယျ။
ပရီးမီးယားလိဂျပှဲတှထေဲကအကြိုးအရှိဆုံးဖွဈနိုငျမယျ့ပှဲရှေးခယျြဖို့ဆုံးဖွတျထားတာနဲ့အညီစနညေပှဲတှကေိုသသေခြောခြာ အားစိုကျလလေ့ာကွညျ့မိတယျ။ မနှဈကဒဏျရာပွဿနာတှကေနေ ခွခြေျောပွီး ခနျြပီယံလမျးကွောငျးပျေါကလိမျ့ကခြဲ့တဲ့ လီဗာပူးနဲ့ တဈနှဈသာတနျးဆငျးခဲ့ပွီးတနျးပွနျတကျလာတဲ့ နျောဝဈချြပှဲကို ကွညျ့တော့လီဗာပူးကအဝေးကှငျးမှာတဈဂိုးတညျးနဲ့နိုငျရငျတာထှကျမှာပဲတာကြိုးရမှာတှရေ့တယျ။ ဂိုးပေါငျးအခွေ အနကေလညျးလေးဂိုးဖွဈမှ ဂိုးပျေါသမားတှေ ကနြေပျခှငျ့ရှိမယျ။ လီဗာပူးမှာလူပွနျစုံပါမှာပါ။ ဒါပမေဲ့ပရိသတျအားကို ပွနျလညျစုပျယူသကျဝငျခှငျ့ကတနျးတကျနျောဝဈချြဘကျကအားသာခကျြတဈခုဖွဈတယျ။ ပွီးတော့နျောဝဈချြဟာမနှဈကခနျြပီယံရှဈမှာ ၉၇ မှတျအထိရယူနိုငျခဲ့ပွီး တိုကျစဈဦးစားပေးအသငျးဖွဈတာတှခေဲ့ရ တယျ။ ဒီလိုဆိုကြှနျတျောတို့ အဝေးကှငျးခံစဈကစားရာမှာစိတျမခရြတဲ့လီဗာပူးဘကျကို နျောဝဈချြတဈဂိုးသှငျးနိုငျမယျလို့ မှနျးဆမိလိုကျရငျလီဗာပူး ၃-၁ ဆိုတဲ့ အနိုငျရလဒျမှအပျေါအားပေးရကြိုးနပျမယျ။ စှနျ့စားရမယျ့ သဘောအမြားကွီးပါနတေယျ။
ကနျြတဲ့ပှဲတှရေဲ့ကွေးနဲ့ ပွိုငျဘကျနှဈသငျး ခွစှေမျးကှာဟခကျြကို တှကျကွညျ့တော့လညျး ခယျြလျဆီး-ပဲလစျေ့ က နှဈဂိုးပွတျနိုငျမှ ခယျြလျဆီးအားပေးရကြိုးနပျမယျ။ ဂိုးပေါငျးဆို သုံးဂိုးဆို ရာနှုနျးတဈဝကျ ပြျောရမယျ့အဖွဈ။ ဒီပှဲလညျး စှနျ့စားစရာတှရှေိပွနျတယျ။ တူခယျြရဲ့ဂိုးမပေးရရေးအဓိကထားတဲ့ ခယျြလျဆီးကစားဟနျ၊ ဗီအဲရာကိုနညျးပွသဈအဖွဈ တငျသှငျးလာတဲ့ ပဲလစျေ့ရဲ့ မနှဈကသှငျးဂိုးပေါငျး (၄၁ ဂိုး) ဆိုတဲ့အခွအေနအေရ ခယျြလျဆီးလှတျကောငျးမပွနိုငျရငျဂိုးတှမြှေျောသလိုဖွဈလာဖို့မလှယျပွနျဘူး။ ဂိုးအမြားရှေးခငျြလညျး စှနျ့စားရတာ မြားနိုငျတယျ။ ကနျြပှဲစဉျတှကွေညျ့ပွနျတော့ ခွစှေမျးအဆငျ့မကှာတဲ့ပွိုငျဘကျတှရေဲ့ ပှဲတှမြေားနလေို့ အကွိုကျဆုံးရှေးခယျြတဲ့တဈပှဲကောငျးဟာလူစိတျဝငျစားမှုအနညျးနိုငျဆုံးပှဲဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။
ဘနျလေ – ဘရိုကျတနျ
စနညေပရီးမီးယားလိဂျပှဲတှထေဲမှာအဝေးကှငျးကကွေးကြောပွနျပေးထားတဲ့ပှဲ သုံးပှဲပဲရှိပါတယျ။ လီဗာပူးကနျောဝဈချြကို ကွေးကြောပေးတာဘာမှမဆနျးပါဘူး။ ဗီလာကဝကျဖို့ဒျကို ပါးပါးလေးပွနျအကြောပေးထားတဲ့ပှဲနဲ့ ဘရိုကျတနျကအဝေးကှငျးမှာဘနျလကေိုမဆိုသလောကျလေးပွနျပေးထားတဲ့နှဈပှဲထဲကပိုသခြောမယျ့ပှဲကိုသခြောလလေ့ာပွီးရှေးခယျြလိုကျပါတယျ။
ကွေးမကှာတဲ့ဒီပှဲမှာဂိုးပေါငျးကွေးကလညျး နှဈဂိုးဆို ပါးပါးလေး နဈနာမယျ့ဖှငျ့လှဈမှုရှိနတေယျ။ ကနျခါနီးကွေးပွောငျးခဲ့ရငျလညျး သိပျမပွောငျးနိုငျဘူးထငျပါတယျ။ မနှဈက တနျးဆငျးရဖို့ ကပျသီလေး လှတျခဲ့ရတဲ့ နောကျဆုံးနှဈသငျးပှဲဖွဈသလို ကစားသမားအပွောငျးအလဲလညျး သိပျမရှိလှတဲ့နှဈသငျးဖွဈလို့ ရှေးခယျြရတာ ပို ပွီး စိတျသနျ့သလိုရှိနခေဲ့တာ ဘနျလနေဲ့ ဘရိုကျတနျပှဲပဲဖွဈတယျ။ နညျးပွရှောငျဒိုငျခြီကိုပဲဆကျခနျ့ထားတဲ့ဘနျလဟောဒီနှမှောလညျးကစားသမားသဈအငျအားဖွညျ့ဖို့ငှပေေးသုံးခွငျးမရှိခဲ့တဲ့အသငျးပါ။ မနှဈကရာသီသိမျးနောကျဆုံးပရီးမီးယားလိဂျကိုးပှဲမှာခုနဈပှဲရှုံးခဲ့တဲ့အတိုငျးအခုလညျးခွစှေမျးသိသိသာသာပွောငျးလဲတိုးတကျလာဖို့ မဖွဈနိုငျပါဘူး။
ဘရိုကျတနျက မနှဈကရာသီမှာ အဆငျ့ (၁၇) နရောက ဘနျလထေကျ နှဈမှတျအသာ အဆငျ့ (၁၆) နရောကသာ ရာသီသိမျးနိုငျခဲ့တယျဆိုပမေယျ့ နှဈသငျးအကွားစှမျးဆောငျရညျနဲ့အလားအလာပိုငျးကအကှာကွီးရှိခဲ့တာကိုသတိပွနျရဖို့ နှိုးဆျောလိုရငျးကဒီပှဲကိုရှေးခယျြရခွငျးရဲ့အဓိကအကွောငျးတရားဖွဈခဲ့တာပါ။ တကယျတမျးဆိုဘရိုကျတနျဟာရာသီတဈလြှောကျလုံးတျောတျောလေးအားရစရာကောငျးတဲ့ကစားပုံရှိခဲ့ပွီးအဆုံးသတျဂိုးသှငျး ပိုငျး အားနညျးတယျဆိုတာထကျကံဆိုးတယျလို့ပိုပွောနိုငျတဲ့အနအေထားကွောငျ့သာ အဆငျ့ (၁၆) နရောရောကျခဲ့ရတာပါ။ ရသငျ့တဲ့ဂိုးတှသောရခဲ့ရငျဘရိုကျတနျဟာ အဆငျ့ (၅) နရောအထိရနိုငျတယျလို့ ကိနျးအညှနျးတှမှောဖျောပွခဲ့တာကိုတှခေဲ့ရပါသေးတယျ။ အခုဘရိုကျတနျရဲ့အပွောငျးအလဲကတော့ဘနျဝှိုကျကိုအာဆငျနယျထံလကျလှတျခဲ့ရတာပဲပွောစရာရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ကှငျးလယျလူသဈအနျနော့ မှီပူကဒီနရောကို အကောငျးဆုံးအစားဝငျနိုငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ရပါတယျ။
နညျးပွ ဂရဟေမျပျေါတာကိုပဲယုံကွညျအပျနှငျးထားဆဲဖွဈတဲ့ဘရိုကျတနျရဲ့အားသာခကျြတှကေို မနှဈကမွငျတှခေဲ့ရသလောကျ ခံစဈကစားပုံ သိပျသညျးမာကြောပွီး တနျပွနျတိုကျစဈကနေ အခှငျ့အရေးရှာရာမှာ ကွောကျ ဖို့ကောငျးတာတှရေ့တယျ။ တညျဘောတှကေနေ ဂိုးယူနိုငျစှမျးရှိတယျ။ မနှဈက အသငျးအတှကျ ဂိုးအမြားဆုံး သှငျးပေးခဲ့တဲ့ တိုကျစဈမှူး နီးလျမူပေးနဲ့ ဝါရငျ့ ဒနျနီဝဲလျဘတျတို့တိုကျစဈကလညျး မက်ကနီးလျ၊ ဗဈဒယား၊ ၀ုဒျတို့ရဲ့ တိုကျစဈထကျ ပိုစိတျလှုပျရှားစနေိုငျစှမျးရှိတဲ့တိုကျစဈဖွဈမှာပါ။
နောကျဆုံးဘာကွောငျ့ ကွေးမကှာတဲ့အနအေထားမြိုးမှာ ဧညျ့သညျ ဘရိုကျတနျကို ရှေးခယျြဖို့ အကောငျးဆုံး ရှေးခယျြမှုအဖွဈ ရှေးခယျြရခွငျးအကွောငျးတရားကို ပွောပါမယျ။ အနိုငျနဲ့အရှုံးတဈခုပဲရှိတယျဆိုတာ ဒီလောက မှာတော့ မဟုတျသေးပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ အနိုငျနဲ့အနိုငျဆိုတာခညျြးပဲလညျး တပျမကျလို့မရနိုငျဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဒီပှဲဟာ အရငျးနဲ့အနိုငျ နှဈမြိုးထဲကရြောကျမယျလို့ ယုံကွညျတဲ့အတှကျ အကောငျးဆုံးရှေးခယျြမှုလုပျခဲ့တာပဲဖွဈ ပါတယျ။
– ဘရိုကျတနျဟာ ဘနျလနေဲ့နောကျဆုံးလေးပှဲစလုံး မရှုံးခဲ့ဘူး။
– ဘနျလဟော မနှဈကနောကျဆုံးရာသီသိမျးကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ကိုးပှဲမှာ ခုနဈပှဲ ရှုံးခဲ့တယျ။ နောကျဆုံးသုံးပှဲ ရှုံးခဲ့ရာမှာ ဂိုးပွနျမသှငျးနိုငျခဲ့ဘူး။
– ဘနျလဟော နောကျဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျအိမျကှငျး ၁၀ ပှဲစလုံး နိုငျပှဲပြောကျထားတယျ။
– မနှဈကရာသီသိမျးနောကျဆုံးသုံးပှဲမှာ ဘနျလဟော ရှဈဂိုးပေးခဲ့ရပွီး တဈဂိုးမှ ပွနျမသှငျးနိုငျခဲ့ဘူး။
– ဘရိုကျတနျဟာ ဘနျလနေဲ့နောကျဆုံးပရီးမီးယားလိဂျလေးကွိမျတှဆေုံ့မှုမှာ သုံးပှဲကို ဦးဆောငျဂိုးသှငျးနိုငျခဲ့တယျ။
– ဘရိုကျတနျရဲ့ နောကျဆုံး ပရီးမီးယားလိဂျ ရှဈပှဲမှာ ခွောကျပှဲက ဂိုးပေါငျး အောကျပှဲတှခေညျြးဖွဈခဲ့တယျ။
ကဲ …………… ဒီတော့
စနညေအကောငျးဆုံးသောပရီးမီးယားလိဂျပှဲရှေးခယျြမှုမှာရှောငျဒိုငျခြီရဲ့ ဘနျလကေိုရှောငျခငျြရတဲ့အကွောငျးပွခကျြတှေ ခိုငျလုံသလောကျရှိပွီထငျပါတယျ။ သှေးသောကျတို့ဘကျကခံယူခကျြတူရငျ ဂရဟေမျပျေါတာရဲ့ စငျရျောတှနေဲ့ ဝဟေငျမှာပြံသနျးလိုကျကွပါတော့။
ရှောင်ဒိုင်ချီကို ရှောင် ……. စင်ရော်တွေနဲ့ ပျံဝဲလိုက်
ဘောလုံးရာသီသစ်ကတော့ အချိန်မှန်ရာသီစက်ဝန်းအတိုင်း ဘောလုံးပရိသတ်ကြီးဆီ ပြန်လည်ရောက်ရှိ လာခဲ့ပါပြီ။ မနှစ်က ကိုဗစ်မွှေလို့ ပရိသတ်မပါဘဲ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ဘောလုံးပွဲတွေဟာ ဒီရာသီမှာတော့ ပရိသတ်အများအပြားပြန်ကြည့်ခွင့်ရခြင်းနဲ့အတူ ကလုံး မဟုတ်တဲ့ အိမ်ကွင်းပရိသတ်စစ်စစ်အင်အားနဲ့ အသက်ပြန်ဝင်လာတော့မှာပါ။ လအတော်ကြာ ပွဲတွေသုံးသပ်ချက်တွေ မရေးဖြစ်၊ မဖော်ပြဖြစ်လို့ ပရိသတ်နဲ့ အဆက်ပြတ်သွားခဲ့မှုကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ကာလအတွက် အခုပြန်လည်ပေးဆပ်ဖို့၊ အတူ ရင်ခုန်ခံစားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီး ပလေးမိတ်ကာနဲ့အတူ ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရာသီသစ်အဖွင့်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အသစ်အသစ်သောအခြေအနေတွေ၊အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ ဒီကာလ ဘော လုံးပွဲခန့်မှန်းရမှုဟာ ရစ်သမ်မမိနိုင်သေးပါဘူး။ ရာသီအဖွင့်ပွဲတွေဆိုတာကလည်း အင်မတန် နတ်ကြီးပါတယ်။ ထိပ်တန်းကစားသမားသစ်တွေခေါ်ထားပြီး အားလုံးရင်ခုန်စွာစောင့်ကြည့်ခံရတဲ့အသင်းကြီးတွေဟာ တန်းတက်တွေကို အနိုင်ရဖို့ အင်မတန်ခက်ခဲခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကလည်း နှစ်တိုင်းရာသီအစတိုင်း ရှိခဲ့တာကို ဖိုက်တာတွေမခံစားဖူး သူ မရှိသလောက်ပဲမဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် ဒီလို ရာသီအဖွင့်ပွဲစဉ်တွေမှာ သတိကြီးစွာထားပြီး တစ်ပွဲကောင်း ရွေးချယ်ဖို့ အတွေးနက်ခဲ့ရပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲတွေထဲက အကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်နိုင်မယ့်ပွဲရွေးချယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာနဲ့အညီ စနေည ပွဲတွေကို သေသေချာချာ အားစိုက်လေ့လာကြည့်မိတယ်။ မနှစ်က ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကနေ ခြေချော်ပြီး ချန်ပီယံလမ်း ကြောင်းပေါ်က လိမ့်ကျခဲ့တဲ့ လီဗာပူးနဲ့ တစ်နှစ်သာတန်းဆင်းခဲ့ပြီး တန်းပြန်တက်လာတဲ့ နော်ဝစ်ခ်ျပွဲကို ကြည့် တော့ လီဗာပူးက အဝေးကွင်းမှာ တစ်ဂိုးတည်းနဲ့နိုင်ရင် တာထွက်မှာပဲ တာကျိုးရမှာတွေ့ရတယ်။ ဂိုးပေါင်းအခြေ အနေကလည်း လေးဂိုးဖြစ်မှ ဂိုးပေါ်သမားတွေ ကျေနပ်ခွင့်ရှိမယ်။ လီဗာပူးမှာ လူပြန်စုံပါမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ပရိသတ် အားကို ပြန်လည်စုပ်ယူသက်ဝင်ခွင့်က တန်းတက် နော်ဝစ်ခ်ျဘက်က အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ နော်ဝစ်ခ်ျဟာ မနှစ်ကချန်ပီယံရှစ်မှာ ၉၇ မှတ်အထိရယူနိုင်ခဲ့ပြီး တိုက်စစ်ဦးစားပေးအသင်းဖြစ်တာတွေ့ခဲ့ရ တယ်။ ဒီလိုဆို ကျွန်တော်တို့ အဝေးကွင်းခံစစ်ကစားရာမှာ စိတ်မချရတဲ့ လီဗာပူးဘက်ကို နော်ဝစ်ခ်ျ တစ်ဂိုးသွင်း နိုင်မယ်လို့ မှန်းဆမိလိုက်ရင် လီဗာပူး ၃-၁ ဆိုတဲ့ အနိုင်ရလဒ်မှ အပေါ်အားပေးရကျိုးနပ်မယ်။ စွန့်စားရမယ့် သဘောအများကြီးပါနေတယ်။
ကျန်တဲ့ပွဲတွေရဲ့ ကြေးနဲ့ ပြိုင်ဘက်နှစ်သင်း ခြေစွမ်းကွာဟချက်ကို တွက်ကြည့်တော့လည်း ချယ်လ်ဆီး-ပဲလေ့စ် က နှစ်ဂိုးပြတ်နိုင်မှ ချယ်လ်ဆီးအားပေးရကျိုးနပ်မယ်။ ဂိုးပေါင်းဆို သုံးဂိုးဆို ရာနှုန်းတစ်ဝက် ပျော်ရမယ့်အဖြစ်။ ဒီပွဲလည်း စွန့်စားစရာတွေရှိပြန်တယ်။ တူချယ်ရဲ့ ဂိုးမပေးရရေးအဓိကထားတဲ့ ချယ်လ်ဆီးကစားဟန်၊ ဗီအဲရာကို နည်းပြသစ်အဖြစ် တင်သွင်းလာတဲ့ ပဲလေ့စ်ရဲ့ မနှစ်က သွင်းဂိုးပေါင်း (၄၁ ဂိုး) ဆိုတဲ့အခြေအနေအရ ချယ်လ်ဆီး လွှတ်ကောင်းမပြနိုင်ရင် ဂိုးတွေ မျှော်သလိုဖြစ်လာဖို့မလွယ်ပြန်ဘူး။ ဂိုးအများရွေးချင်လည်း စွန့်စားရတာ များနိုင်တယ်။ ကျန်ပွဲစဉ်တွေကြည့်ပြန်တော့ ခြေစွမ်းအဆင့်မကွာတဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ ပွဲတွေများနေလို့ အကြိုက်ဆုံး ရွေးချယ်တဲ့ တစ်ပွဲကောင်းဟာ လူစိတ်ဝင်စားမှုအနည်းနိုင်ဆုံးပွဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဘန်လေ – ဘရိုက်တန်
စနေည ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲတွေထဲမှာ အဝေးကွင်းကကြေးကျောပြန်ပေးထားတဲ့ပွဲ သုံးပွဲပဲရှိပါတယ်။ လီဗာပူးက နော်ဝစ်ခ်ျကို ကြေးကျောပေးတာ ဘာမှမဆန်းပါဘူး။ ဗီလာက ဝက်ဖို့ဒ်ကို ပါးပါးလေးပြန်အကျောပေးထားတဲ့ပွဲနဲ့ ဘရိုက်တန်က အဝေးကွင်းမှာ ဘန်လေကို မဆိုသလောက်လေး ပြန်ပေးထားတဲ့ နှစ်ပွဲထဲက ပိုသေချာမယ့်ပွဲကို သေချာလေ့လာပြီး ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။
ကြေးမကွာတဲ့ဒီပွဲမှာ ဂိုးပေါင်းကြေးကလည်း နှစ်ဂိုးဆို ပါးပါးလေး နစ်နာမယ့်ဖွင့်လှစ်မှုရှိနေတယ်။ ကန်ခါနီး ကြေးပြောင်းခဲ့ရင်လည်း သိပ်မပြောင်းနိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။ မနှစ်က တန်းဆင်းရဖို့ ကပ်သီလေး လွတ်ခဲ့ရတဲ့ နောက်ဆုံးနှစ်သင်းပွဲဖြစ်သလို ကစားသမားအပြောင်းအလဲလည်း သိပ်မရှိလှတဲ့နှစ်သင်းဖြစ်လို့ ရွေးချယ်ရတာ ပို ပြီး စိတ်သန့်သလိုရှိနေခဲ့တာ ဘန်လေနဲ့ ဘရိုက်တန်ပွဲပဲဖြစ်တယ်။ နည်းပြရှောင်ဒိုင်ချီကိုပဲ ဆက် ခန့်ထားတဲ့ဘန်လေဟာ ဒီနွေမှာလည်း ကစားသမားသစ်အင်အားဖြည့်ဖို့ ငွေပေးသုံးခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အသင်းပါ။ မနှစ်က ရာသီသိမ်း နောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိဂ် ကိုးပွဲမှာ ခုနစ်ပွဲရှုံးခဲ့တဲ့အတိုင်း အခုလည်း ခြေစွမ်း သိသိသာသာပြောင်းလဲတိုးတက်လာဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဘရိုက်တန်က မနှစ်ကရာသီမှာ အဆင့် (၁၇) နေရာက ဘန်လေထက် နှစ်မှတ်အသာ အဆင့် (၁၆) နေရာကသာ ရာသီသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် နှစ်သင်းအကြား စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အလားအလာပိုင်းက အကွာကြီးရှိခဲ့တာကို သတိပြန်ရဖို့ နှိုးဆော်လိုရင်းက ဒီပွဲကို ရွေးချယ်ရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားဖြစ်ခဲ့တာပါ။ တကယ်တမ်းဆို ဘရိုက်တန်ဟာ ရာသီတစ်လျှောက်လုံး တော်တော်လေး အားရစရာကောင်းတဲ့ကစားပုံရှိခဲ့ပြီး အဆုံးသတ်ဂိုးသွင်း ပိုင်း အားနည်းတယ်ဆိုတာထက် ကံဆိုးတယ်လို့ပိုပြောနိုင်တဲ့အနေအထားကြောင့်သာ အဆင့် (၁၆) နေရာ ရောက်ခဲ့ရတာပါ။ ရသင့်တဲ့ဂိုးတွေသာ ရခဲ့ရင် ဘရိုက်တန်ဟာ အဆင့် (၅) နေရာအထိ ရနိုင်တယ်လို့ ကိန်းအညွှန်း တွေမှာ ဖော်ပြခဲ့တာကို တွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်။ အခုဘရိုက်တန်ရဲ့အပြောင်းအလဲကတော့ ဘန်ဝှိုက်ကို အာဆင်နယ် ထံ လက်လွှတ်ခဲ့ရတာပဲ ပြောစရာရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကွင်းလယ်လူသစ်အန်နော့ မွီပူက ဒီနေရာကို အကောင်းဆုံး အစားဝင်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
နည်းပြ ဂရေဟမ်ပေါ်တာကိုပဲ ယုံကြည်အပ်နှင်းထားဆဲဖြစ်တဲ့ ဘရိုက်တန်ရဲ့အားသာချက်တွေကို မနှစ်ကမြင် တွေ့ခဲ့ရသလောက် ခံစစ်ကစားပုံ သိပ်သည်းမာကျောပြီး တန်ပြန်တိုက်စစ်ကနေ အခွင့်အရေးရှာရာမှာ ကြောက် ဖို့ကောင်းတာတွေ့ရတယ်။ တည်ဘောတွေကနေ ဂိုးယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ မနှစ်က အသင်းအတွက် ဂိုးအများဆုံး သွင်းပေးခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူး နီးလ်မူပေးနဲ့ ဝါရင့် ဒန်နီဝဲလ်ဘတ်တို့တိုက်စစ်ကလည်း မက္ကနီးလ်၊ ဗစ်ဒယား၊ ၀ုဒ်တို့ရဲ့ တိုက်စစ်ထက် ပိုစိတ်လှုပ်ရှားစေနိုင်စွမ်းရှိတဲ့တိုက်စစ်ဖြစ်မှာပါ။
နောက်ဆုံးဘာကြောင့် ကြေးမကွာတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ ဧည့်သည် ဘရိုက်တန်ကို ရွေးချယ်ဖို့ အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုအဖြစ် ရွေးချယ်ရခြင်းအကြောင်းတရားကို ပြောပါမယ်။ အနိုင်နဲ့အရှုံးတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတာ ဒီလောက မှာတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အနိုင်နဲ့အနိုင်ဆိုတာချည်းပဲလည်း တပ်မက်လို့မရနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီပွဲဟာ အရင်းနဲ့အနိုင် နှစ်မျိုးထဲကျရောက်မယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ် ပါတယ်။
– ဘရိုက်တန်ဟာ ဘန်လေနဲ့နောက်ဆုံးလေးပွဲစလုံး မရှုံးခဲ့ဘူး။
– ဘန်လေဟာ မနှစ်ကနောက်ဆုံးရာသီသိမ်းကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ကိုးပွဲမှာ ခုနစ်ပွဲ ရှုံးခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးသုံးပွဲ ရှုံးခဲ့ရာမှာ ဂိုးပြန်မသွင်းနိုင်ခဲ့ဘူး။
– ဘန်လေဟာ နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်အိမ်ကွင်း ၁၀ ပွဲစလုံး နိုင်ပွဲပျောက်ထားတယ်။
– မနှစ်ကရာသီသိမ်းနောက်ဆုံးသုံးပွဲမှာ ဘန်လေဟာ ရှစ်ဂိုးပေးခဲ့ရပြီး တစ်ဂိုးမှ ပြန်မသွင်းနိုင်ခဲ့ဘူး။
– ဘရိုက်တန်ဟာ ဘန်လေနဲ့နောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်လေးကြိမ်တွေ့ဆုံမှုမှာ သုံးပွဲကို ဦးဆောင်ဂိုး သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။
– ဘရိုက်တန်ရဲ့ နောက်ဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ် ရှစ်ပွဲမှာ ခြောက်ပွဲက ဂိုးပေါင်း အောက်ပွဲတွေချည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကဲ …………… ဒီတော့
စနေညအကောင်းဆုံးသော ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲရွေးချယ်မှုမှာ ရှောင်ဒိုင်ချီရဲ့ ဘန်လေကိုရှောင်ချင်ရတဲ့ အကြောင်း ပြချက်တွေ ခိုင်လုံသလောက်ရှိပြီထင်ပါတယ်။ သွေးသောက်တို့ဘက်က ခံယူချက်တူရင် ဂရေဟမ်ပေါ်တာရဲ့ စင်ရော်တွေနဲ့ ဝေဟင်မှာပျံသန်းလိုက်ကြပါတော့။
ဂိုးမိုးတှေ ရှာခတြာမြား ရှဲရှဲစိုလို့